रोगले ग्रसित शिर्ष नेताहरु,कसलाई के रोग छ ? जानौं – « News24 : Premium News Channel
रोगले ग्रसित शिर्ष नेताहरु,कसलाई के रोग छ ? जानौं –
स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने उखान यत्तिकै चलेको होइन । मान्छे स्वस्थ हुनका लागि उसको तन र मन दुवै स्वस्थ हुनुपर्छ। स्वस्थ व्यक्तिको क्रियाकलाप सहज सामान्य र निर्णय क्षमता पनि राम्रो हुन्छ। देश सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेका नेताहरू शारीरिक र मानसिक दृष्टिले स्वस्थ हुन झनै आवश्यक छ नै । नेताको स्वास्थ्यसंग देश र जनताको स्वास्थ्य नै गासिएको हुन्छ समेत भनिन्छ । एउटा स्वस्थ्य र सकारात्मक सोंच भएको व्यक्तिबाट हुने निर्णय सकारात्मक नै हुने अपेक्षा गरिनु अन्यथा होइन पनि ।
करिब नौ वर्षअघि भारतको अपोलो अस्पतालमा प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। पछिल्लो समय सेवन गरिरहेका विभिन्न औषधिका कारण सुगरको मात्रा बढेर बेला बेला मा दुख दिरहन्छ (शरीरलाई शक्ति दिने स्टोरोयडसहित)का साथै उनी सुगर, पायल्स र उच्च रक्तचापको औषधिसमेत नियमित खाइरहेका छन्। उनलाई राति आँखा नदेख्ने समस्या पनि छ। मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि खाने औषधिले रक्तचाप, सुगर र युरिक एसिडसमेत बढाउन सक्ने र संक्रमणको जोखिम पनि बढी हुने भएकाले धेरै मानिससँग सम्पर्कमा नरहन ओलीलाई चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्।
उनलाई मुटु र फोक्सोसम्बन्धी समस्या छ। उच्च रक्तचाप पनि छ । उनले अहिले नियमित योग र व्यायाम गरिहेका छन्। निमोनिया र पिसाबमा संक्रमणसमेत देखिएपछि नेपाल केही सयमअघि लामै समय अस्पताल बसेका थिए। रोगले च्याप्न थालेपछि नेपालले खानपान र दैनिक व्यवहारमा निकै ध्यान पुर्याउने गरेका छन्।
७.डा. बाबुराम भट्टराई